Cockpit: ဆာဗာစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် web interface နှင့် application Linux မှ
Linux Post Install လုပ်ပါ | 19/08/2021 06:00 | ကွန်ရက်များ / ဆာဗာများ, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးမြတ်ပြီးလူသိများသည်ကိုစူးစမ်းခဲ့သည် software tool ပါ အိုင်တီနယ်ပယ် ကွန်ယက်များနှင့်ဆာဗာများ ခေါ်ဆိုခ Nagios Coreမရ။ ၎င်းကိုအခြားနည်းလမ်းများထဲမှကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြသည် "တိုက်ခန်း".
ဒါကြောင့်ဒီနေ့ငါတို့ခေါ်တဲ့ဒီအခြားကောင်းတဲ့ software tool တစ်ခုကိုစူးစမ်းကြည့်မယ် "တိုက်ခန်း"၎င်းသည်နှစ်ခုလုံးအတွက်အလွန်အသုံးဝင်နိုင်သည် စနစ် / ဆာဗာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ (SysAdmins)မည်သည့်အရာအတွက်မဆို အိုင်တီပညာရှင် o ကွန်ပျူတာနှင့် Linux ဝါသနာပါသူ။
ပြီးတော့ငါတို့ရဲ့အရင်ပို့စ်ကိုမစူးစမ်းဖူးသေးတဲ့သူတွေအတွက် Nagios Core နှင့်အခြားအလားတူကိရိယာများ ကွန်ရက်များနှင့်ဆာဗာများ သို့မဟုတ်သီးခြားအသုံးပြုရန် စနစ် / ဆာဗာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ (SysAdmins)ဤ IT နယ်ပယ်နှင့်သက်ဆိုင်သောယခင်ထုတ်ဝေမှုများသို့အချို့သော link များကိုကျွန်ုပ်တို့ချက်ချင်းချန်ထားခဲ့ပါမည်။
"Nagios® Core an သည် open source network နှင့် system monitoring application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်သတ်မှတ်သောအိမ်ရှင်များ (ကွန်ပျူတာများ) နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုစောင့်ကြည့်သည်၊ အမှားများဖြစ်လာသည့်အခါသင့်အားသတိပေးသည်။ Nagios Core ကိုမူလက Linux အောက်တွင်အလုပ်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သော်လည်း၎င်းသည်အခြား Unix-based Operating Systems အများစုနှင့်လည်းအလုပ်လုပ်သင့်သည်။ ၎င်းသည် Nagios XI ဟုခေါ်သောကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိ tool ၏အခမဲ့ဗားရှင်းဖြစ်သည်။" Nagios Core: Nagios ဆိုတာဘာလဲ၊ Debian GNU / Linux မှာဘယ်လို install လုပ်မလဲ။
Webmin - ဝဘ်ဘရောက်ဇာမှစီမံခန့်ခွဲမှု
TurnKey Linux: Virtual ကိရိယာစာကြည့်တိုက်
1 Cockpit: တည်ငြိမ်သောဗားရှင်းနံပါတ် ၂၅၀
1.1 Cockpit ဆိုတာဘာလဲ။
1.3 ၎င်းကို Debian GNU / Linux 10 တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
2 အခမဲ့နှင့်ဖွင့်ထားသောအခြားနည်းလမ်း ၁၀ ချက်
Cockpit: တည်ငြိမ်သောဗားရှင်းနံပါတ် ၂၅၀
အဆိုပါအညီ Cockpit Project ၏တရားဝင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်, "တိုက်ခန်း" software tool သည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
"AND၎င်းသည်ဆာဗာများအတွက် web-based graphical interface ဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့် Windows Operating Systems ၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအပါအ ၀ င် Linux နှင့်အတွေ့အကြုံမရှိသောသူများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ Linux နှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိသူများနှင့်ကွန်ယက်ပေါ်တွင်ဆာဗာများနှင့်အခြားကွန်ပျူတာများကိုစီမံရန်လွယ်ကူပြီးဂရပ်ဖစ်နည်းလမ်းလိုချင်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်အခြားကိရိယာများကိုသုံးသောအတွေ့အကြုံရှိသော IT စီမံခန့်ခွဲသူများအတွက်သင့်တော်သော်လည်းတစ် ဦး ချင်းစနစ်များကိုခြုံငုံသုံးသပ်လိုသည်။"
၎င်း၏ developer များကအသေးစိတ်ဖော်ပြသည် "တိုက်ခန်း":
အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်: ၎င်းသည် terminal command များအသုံးပြုမှုကိုလျော့နည်းစေသောကြောင့် web interface မှတဆင့်အလုပ်များကိုချောမွေ့စွာအသုံးပြုနိုင်ပြီး mouse ကိုသုံးခြင်းနှင့်လိုအပ်သောအခါအသုံးဝင်သောပေါင်းစည်းထားသော terminal တစ်ခုပါ ၀ င်သည်။
၎င်းသည်သုံးသော operating system နှင့်ကောင်းမွန်သောပေါင်းစည်းမှုရှိသည်: ၎င်းသည်၎င်း၌စနစ်ရှိပြီးသား API များကိုသုံးသည်။ ၎င်းသည် subsystems များကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းသို့မဟုတ်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် tools များ၏အလွှာကိုမထည့်သွင်းပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် Cockpit သည်ပုံမှန် system အသုံးပြုသူများ၏ logins များနှင့်အခွင့်ထူးများကိုအသုံးပြုသည်။ Network-wide logins များသည် single sign-on နှင့်အခြား authentication နည်းပညာများကိုထောက်ပံ့သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အရင်းအမြစ်များကိုအသုံးမ ၀ င်လျှင်နောက်ခံ၌မသုံးပါ။ systemd socket ၏ activation ကြောင့်၎င်းသည် ၀ ယ်လိုအားပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။
၎င်းသည်ချဲ့နိုင်သည်: ၎င်းသည်ရွေးချယ်နိုင်သော application များ (add-ons / plugins) များနှင့်၎င်း၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်နယ်ပယ်ကိုတိုးတက်စေသောတတိယပါတီများကိုထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည် Cockpit အားလိုအပ်သောအရာကိုပြုလုပ်ရန်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက် modules များကိုရေးခွင့်ပြုသည်။
ဒါ့အပြင်အတူ "တိုက်ခန်း" များစွာသောအလုပ်များကိုလုပ်နိုင်ပြီးအောက်ပါ ၁၀ ခုကိုဖော်ပြနိုင်သည်။
သိုလှောင်မှု (RAID နှင့် LUKS partitions များအပါအ ၀ င်) ကိုစီမံပါ။
virtual machine များကိုဖန်တီးပြီးစီမံပါ။
ကွန်တိန်နာများကို download လုပ်ပြီး run ပါ။
System တစ်ခုရဲ့ Hardware ကိုစစ်ဆေးပါ။
software ကို update လုပ်ပါ။
၎င်းကို Debian GNU / Linux 10 တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
ဤအပိုင်းကိုမစတင်မီ၊ ဤလက်တွေ့ကိစ္စအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်အတိုင်းသုံးသည်ကိုသတိပြုသင့်သည် Linux ကို Respin လုပ်ပါ ကိုခေါ် အံ့ဖွယ်အမှုများ GNU / Linuxအပေါ်အခြေခံပြီးသော MX Linux ကို 19 (Debian 10)မရ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အောက်ပါအတိုင်းတည်ဆောက်ထားသည် «Snapshot MX Linux လမ်းညွှန်».
သို့သော်မည်သည့်အရာမဆို GNU / Linux Distro ဘာအကူအညီလဲ Systemdမရ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ဒါကိုသုံးပါမည် MX Linux respin မှစ GRUB boot system မင်းရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့ "Systemd ဖြင့်စတင်ပါ"မရ။ ၎င်း၏ default option အစားမပါသောအရာဖြစ်သည် Systemd ဒါမှမဟုတ်အစား Systemd-ရှိန်းမရ။ ဒါ့အပြင်ငါတို့က command တွေအားလုံးကို execute လုပ်လိမ့်မယ် Sysadmin အသုံးပြုသူ, အစား Root အသုံးပြုသူRespin Linux မှပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုသင်၏အဘို့ ဒေါင်းလုပ်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ညွှန်ကြားချက်များကိုသုံးလိမ့်မည် Debian GNU / Linux de la «ထည့်သွင်းမှုလမ်းညွှန်».
မသန်စွမ်း Distros Debian 10 (Buster) သို့မဟုတ်၎င်းတို့အပေါ် အခြေခံ၍ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည် ဒေါင်းလုပ်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်း de "တိုက်ခန်း" , သည် configure လုပ်ရန်ဖြစ်သည် Debian Backport သိုလှောင်ရုံများတတ်နိုင်သမျှနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းနှင့်အဆင်ပြေဆုံးအရာအားလုံးကိုသယ်ဆောင်ရန်ထိုနေရာမှ ဤအတွက်အောက်ပါတို့ကိုဆောင်ရွက်ရမည် command ကိုအမိန့် သင်၏ Operating System ၏ terminal (console) တွင်
ထိုအခါငါတို့သာရှိသည် ဖွင့်လှစ် browser ကို ပြီးတော့ငါတို့စီမံချင်တဲ့စက်ရဲ့ local ဒါမှမဟုတ် remote လမ်းကြောင်း address address ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ အဝေးမှကွန်ပျူတာဖြစ်နေလျှင်၎င်းကိုထည့်သွင်းထားရမည် "တိုက်ခန်း"အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း -
ပိုမိုသိရှိလိုပါက "တိုက်ခန်း" အောက်ပါ link တွေမှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
အသုံးချမှုများ (ပလပ်အင်များ / ပလပ်အင်များ)
အခမဲ့နှင့်ဖွင့်ထားသောအခြားနည်းလမ်း ၁၀ ချက်
PHP Server Monitor များ
ဤအကြောင်းများပိုမိုလေ့လာရန် အခြားနည်းလမ်း နှင့်အခြားအရာများ၊ အောက်ပါ link ကိုနှိပ်ပါ။ Open Source အောက်ရှိစက်ပစ္စည်းများနှင့် Network Monitoring Software.
အချုပ်အားဖြင့်မြင်ပြီ "တိုက်ခန်း" တူပါတယ် Nagios Core နယ်ပယ်တွင်အလွန်ကောင်းသော software tool တစ်ခုဖြစ်သည် ကွန်ရက်များ / ဆာဗာများ နှင့် စနစ် / ဆာဗာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ (SysAdmins)မရ။ သို့သော်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုသို့မဟုတ်အစားထိုးရန်ထက်ကျော်လွန်သည် Nagios Core ၎င်းကိုဖွဲ့စည်းရန်အတွက်၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံသောအဖြည့်ခံတစ်ခုဖြစ်သည် ပစ္စည်းကိရိယာစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် application kit ကွန်ယက်တွင် (အိမ်ရှင်)
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ကွန်ရက်များ / ဆာဗာများ » Cockpit: server စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် web interface နှင့် application
အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ webmin ဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပါ Luix မင်းရဲ့မှတ်ချက်နဲ့ပံ့ပိုးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။